भोलि असार १८ गते बिहिबार, कस्तो बित्ला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
भोलि असार १८ गते बिहिबार, कस्तो बित्ला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
असार १७, २०७७ ST
आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट दिन अद्वितीय रहनेछ। सामाजिक कार्यहरुमा व्यस्तता बढ्नेछ। सामाजिक कार्यमा भागदौड हुनाले स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने हुँदा सावधान रहनु होला। नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुने देखिन्छ। सरकारी काममा पनि सफलता मिल्नेछ। विदेशबाट शुभ समाचार मिल्न सक्ला। दिन प्रेम सम्बन्धको मामलामा पनि सुखद रहनेछ।
दिन हरेक तरिकाबाट शुभ सावित हुने देखिन्छ। विशेष गरेर व्यवसाय गर्नेहरुलाई दिनमा लाभै-लाभ मिल्नेछ। अध्ययनमा पनि सफलता मिल्न सक्ला। उच्च अधिकारीसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनाले जागिरमा पदोन्नती समेत मिल्नेछ। धेरै समय देखि भेट नभएका मित्रजनसंगको भेट पनि फलदायी सावित हुन सक्ला।
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश काममा बाधा पुग्न सक्ने देखिन्छ। दिन मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ भने नैतिकतामा संयमतालाई निरन्तरता दिनु पर्ने देखिन्छ। कुनै पनि अनैतिक कार्य नहोस भन्नको लागि सजक रहनू होला। अनियन्त्रित खर्चले आर्थिक समस्या पैदा गर्न सक्ने हुँदा खर्चमा नियन्त्रण राख्नु होला। यात्रा भने लाभप्रद नै रहला।
आफ्नैले धोका दिन सक्ने हुँदा सावधान रहनु होला। नयाँ काममा हात हाल्दा संयम रहनु होला। कुनै पनि आर्थिक कार्य थालनी गर्नु भन्दा अगाडी अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ। अहिलेको फाइदा हेर्दा पछि घाटा हुनेछ। साझेदारीमा समस्या आउनाले सम्झौता भंग हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। पारिवारिक वातावरण पनि खासै राम्रो नहुने देखिन्छ।
प्रतिस्पर्धीहरु सजिलै परास्त हुनेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला बढाउनेछ। विशेष योजना सफल हुने भोलिको दिनमा तपाईले आफ्नो गोपनियताको भने खायल राख्नु होला। दीर्घकालीन महत्त्वका काममा हतार नगर्नु होला। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई तह लगाउन सफल हुनुहुनेछ। अतिथिका रूपमा सेवा सत्कार प्राप्त हुनेछ।
दिन तपाईको लागि मिश्रित फलदायी हुने देखिन्छ। परिवार साथै आफन्तजनसँगको सम्बन्ध खासै राम्रो नहुने भएपनि सामाजिक सम्बन्धहरुमा भने सुधार हुनेछ। अध्ययनमा पनि सफलता मिलन गार्है देखिन्छ। तर, कलाकारहरुको लागि भने दिन धेरै शुभ देखिन्छ। आम्दानी राम्रो भए पनि नजानिँदो रूपमा खर्च हुन सक्ला। लक्ष्यमा पुग्न अरूका लागि केही कठोर काम गर्नु पर्नेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट दिन धेरैनै फलदायी हुने देखिन्छ। नयाँ कार्य थालनीको लागि पनि दिन शुभ रहन सक्ला। लगनशील कार्यशैलीले लक्ष्यमा सजिलै पुर्याउन सक्छ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। सर्वत्र प्रसंशा मात्र हुने देखिन्छ। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूबाट साथ पाइनेछ। यधपी मनोबलमा केहि गिरावटको सामना भने हुन सक्ला।
दिन सम्पूर्ण क्षत्रमा सफल रहने देखिन्छ। नयाँ कार्य थालनीको लागि लगानी मात्र मिल्ने नभैकन उचित साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्ने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोग दिने देखिन्छ। कानुनी रुपमा रहेका समस्या देखि छुटकारा पनि मिल्न सक्ला। यस्तै वैदेशिक यात्राको योजना सफल हुने देखिन्छ।
मिहिनेतकाे नतिजा चित्तबुझ्दाे नहुँदा तपाईमा निराशा छाउने देखिन्छ। कामकाे चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिने दिन परेको छ। क्रोधमा मात्र नभई बोलीमा पनि नियन्त्रण राखेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। कार्यलयमा असमझदारी बढेर जाने देखिन्छ। कुनै पनि गलत निर्णय नहोस भन्नको लागि सजक रहनु होला। कुनै पनि निर्णय गर्नु भन्दा पहिला परिवारमा वहस अपरिहार्य देखिन्छ।
व्यवसाय साथै कार्यालयमा परिस्थिति अनुकूल रहने देखिन्छ। कानुनी कार्यमा सफलता मिल्न सक्ला भने कलाको क्षत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। कुशलतापूर्वक कार्य सफल गर्न अग्रसर रहनु हुनेछ। कार्यशैलीका कारण मान-सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ला। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका मिल्न सक्ला। चिताउनु भएको हरेक कार्य सफल रहनेछन्।
हरेक क्षेत्रमा यश, कीर्ति बढेर जाने हुँदा मानसिक रुपमा खुशी मिल्न सक्ला। आर्थिक रुपमा जुनै पनि क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। उच्च अधिकारीबाट राम्रै सहयोग मिल्न सक्ला। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्न पर्नेछन्। पढाइमा प्रगति हुनेछ । साथै नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्न सक्ला।
परिवारमा हुने दुःखलाग्दो वातावरणको कारण उदास रहनु हुने देखिन्छ। हरेक परिस्थितिमा अटल रहेको रहनु भएमा मात्र दिन सफल रहन सक्ला। आर्थिक क्रियाकलापमा संयम रहनु पर्ने देखिन्छ। स्वास-प्रस्वास सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ला। कोहिसँग मनमुटाव नहोस् भन्नको लागि सजक रहनु होला। साझेदारीमा समस्या आउनाले व्यवसायमा समस्या देखा पर्न सक्ला।
प्रकाशित : बुधबार, असार १७, २०७७१४:५७